Iphrofayili yenkampani - I-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd.
IShenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd itholakala esifundeni sasePingshan, eShenzhen, eduze naseHong Kong naseMacao, nokuhamba okulula. Le nkampani ingamabhizinisi asezingeni eliphakeme asezingeni eliphezulu ngentuthuko, ukukhiqiza kanye nokuthengisa kabusha kwe-Lithium Ion ibhethri, i-Pack nesixazululo sebhethri. Le nkampani yasungulwa ngonyaka ka-2008, imboza indawo engamamitha-skwele ayi-8,000. Njengamanje inkampani inabasebenzi abangaphezu kwe-1600, ngaphezu kweqembu le-QC elingaphezulu kwe-110 neqembu lobuchwepheshe abangama-60. Zonke izici zokukhiqizwa kusuka ekuthengweni kwezinto zokusetshenziswa kwezinto ezingavuthiwe ziye ekuthunyelweni komkhiqizo kuqashwa ngabasebenzi be-QC. Manje sinomnyango webhethri we-cylindrical, iphakethe elithambile (i-Li-polymer), ibhethri Pack kanye nomnyango wesistimu yokuphatha. Ekhiqiza amaseli we-18650 kanye ne-14500 Lithium ion amaseli aze afike ku-200,000Ah ngosuku. Sisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nemishini, izindlela zokuphatha zesayensi ze-ISO 9001 nezindlela zokutholwa ezithuthukisiwe, siqinisekisa ukuphepha nokuqina komkhiqizo. Imikhiqizo yebhethri ye-SOSLLI yamukelwa kabanzi ngamakhasimende omhlaba. Sisebenza ngokubambisana namakhasimende ukuhlinzeka ngokuphepha, impilo yomjikelezo omude, imikhiqizo nezinsizakalo zebhethri ezingabizi. Amakhasimende ethu ayazuza ngemikhiqizo ebanzi ye-SOSLLI kanye nekhono lobuchwepheshe kubhethri le-E-bike, ibhethri lamandla, ibhethri lokulondolozwa kwamandla, ibhethri lezimboni ze-3C kanye nepakethe yebhethri elenzelwe lona. Umkhiqizo osetshenziswa kakhulu kumafoni ama-smart phone, ama-laptop, amadivaysi smartable, amadivaysi e-IoT, amakhamera edijithali, imikhiqizo ye-Bluetooth, imikhiqizo yokukhanyisa, i-GPS, i-DVR, i-E-ugwayi, i-E-toothbrush, i-E-toys, i-power bank, i-UPS energy, i-drain ephezulu I-RC UAV namaRobhothi, i-AGV, ithuluzi lamandla, imishini yezokwelapha, njll.
I-SOSLLI idlulise i-ISO 9001: uhlelo lwekhwalithi ye-2008 kanye nesitifiketi semvelo se-ISO 14001, imikhiqizo yethu yebhethri ithole i-UL, i-CB, IEC 62133, i-CQC, i-CE, i-RoHS, isitifiketi sokugunyazwa kwe-KC, kanye nesitifiketi esihlobene nokuthuthwa kanye nokubika i-MSDS, i-UN38.3, umbiko wokuhlolwa kwezokuhamba olwandle nowomoya, njll.
AbakwaSOSLLI babenezinhlelo zokwakhiwa kwebhethri ezisezingeni eliphakeme, ikhabethe lokuguga, ithuluzi lokuhlola le-BMS le-100v enkulu yokuhlola okupakisha i-li-ion yebhethri, umshini welding othomathikhi, umshini wokufanisa okokuhlunga okuzenzakalelayo nendawo yokuhlola. Isikhungo sokuhlola se-SOSLLI singafinyelela: ukuhlolwa kokuphepha, ukuhlolwa okushisa okuphezulu nokuphansi, ukuhlolwa kwemvelo, ukushayeka nokuhlolwa kwe-acupuncture, ukuhlolwa kokwehla. Kunamaqembu angama-66 R&D angamaphesenti angama-80 angonjiniyela abakhulu embonini yebhethri ngaphezulu kweminyaka eyi-10. Isikhungo sokucwaninga nentuthuko sisebenza ngama-elekthronikhi, isakhiwo, ukunikezwa kwamandla, ubuchwepheshe bePack, i-PV, njll
I-SOSLLI ihlinzeka ngemikhiqizo yebhethri ye-OEM ne-ODM ye-lithium ion nezixazululo. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi embonini yezempi, ekwelashweni kwezokwelapha, kwezezimali, kwezokuxhumana, kwezokuphepha, ezokuhamba, ezimayini, ezokubhalwa kwempahla, ezokugcina izinto nezinto zombane zabathengi.
Sakha ubudlelwano obuhle bebhizinisi nePanasonic, Philips, Samsung, voltronicpower, Mindry, BOSCH, DJI, Linde, njll namakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ibhethri lethu linokuvikelwa kwangempela kwemvelo, ukuphepha, impilo ende, amandla aphezulu ahlukile.
AbakwaSOSLLI balwela ipulatifomu yomhlaba wonke yokuhlinzeka ngezinsizakalo zebhethri elilodwa. Siyakwamukela ukuvakasha futhi uthinte nathi.
Amaseli ebhethri weLithium Ion, I-20ah Lithium Ion Ibhethri, Ibhethri Lithium Lamandla, Iphakethe lebhethri lamandla, I-Power Lithium Battery Pack, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion,